မြန်မာ့အကကို ကြည့်မဝနိုင်အောင် ကပြလိုက်တဲ့ ဆရာမလေး (ရုပ်သံ) – အနုပညာရပ်ဝန်း
အားပေးမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ…. မြန်မာအကတွေကို တန်ဖိုးထားလေးစားသလို နောက်မျိုးဆက် တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြန်လည်မျှဝေပေးနေတဲ့ ဆရာမခိုင်မာလွင်ရဲ့ ကြည့်ရှုသူ တစ်သန်းနီးပါးအားပေးခဲ့တဲ့ အကဗွီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။credit
?စိန်နားကပ်ကြီး ပန်ရမလို??အဆို -နီနီဝင်းရွှေ?‍♂️အက- ခိုင်မာလွင်မိတ်ကပ်မပါသဘာ၀မို့ သည်းခံပေးကြပါ?ဆရာသမားများကို ဂါရဝပြုလျက်ပါရှင်?အကြွားကဖြင့်ပို စကားကမြင့်မိုရ် ကတိတွေ ပေးထားတာလည်း လွန်နေပြီရှင့် အစ်ကို တစ်နေ့ ရွှေ တစ်နေ့ငွေ တွေ့တဲ့အခါတိုင်း သူဆို နောက်ကွယ်ကျရင် မေ့လို့နေတဲ့ ကိုလူပျို ဘဝင်မကျလို့ ကျွန်မရင်ကဖို အရင်လို မဟုတ်သူမောင့်ကို ကြည့်ရတာ ခြေလှမ်းပျက်သလို မကြိုက်တာတွေရင် ပြောရလိမ့်မယ် မညှာဘူးအစ်ကို
Posted by Khaing Mar Lwin on Saturday, August 8, 2020
အားပေးမှုရရှိခဲ့တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ ပရိသတ်ကြီးရေ…. မြန်မာအကတွေကို တန်ဖိုးထားလေးစားသလို နောက်မျိုးဆက် တွေကို လက်ဆင့်ကမ်းပြန်လည်မျှဝေပေးနေတဲ့ ဆရာမခိုင်မာလွင်ရဲ့ ကြည့်ရှုသူ တစ်သန်းနီးပါးအားပေးခဲ့တဲ့ အကဗွီဒီယိုလေးကိုပရိသတ်ကြီးအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေး လိုက်ပါတယ်။
ကြားသိသူတိုင်း အံ့သြသွားမယ့် ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်က မယားရှိ ဆရာနဲ့ လင်ရှိ ဆရာမတို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်း (ရုပ်သံ)